प्रचण्ड त सम्हालिए,परिवारलाई कसरी सम्हाल्लान ? – YesKathmandu.com
प्रचण्ड त सम्हालिए,परिवारलाई कसरी सम्हाल्लान ?
सोमबार ०४, मङि्सर २०७४
काठमाडौं । पुत्र वियोगको पीडामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन् । छोरीको निधन भएको तीन वर्षपछि एक मात्र छोरा प्रकाशलाई पनि गुमाएका प्रचण्डले ठूलो पीडा भइरहेको बताए ।
उनले अघि भने, ‘मैले त पार्टीको लिडरको हैसियतले, हिजोको युद्ध, शान्ति सबै घटनाले रियलाइजेसन गर्नसक्ने नै कुरा छ तर परिवारलाई सम्हाल्न गाह्रो छ । किनभने पहिले छोरीको घटना र अहिलेको यो घटनाले विक्षिप्तता ल्याएको छ ।’आफूलाई भेट्न सोमबार बिहान लाजिम्पाटस्थित निवास आएकाहरुलाई उनले भने, ‘जनताले हामीबाट अभिभावक जस्तै भूमिका खोजेको छ । हामीले धैर्य गर्नुपर्छ भनेपछि बिस्तारै नर्मल हुने तिर गएको छ । नर्मल भइसकेको त छैन । पीडा ठूलै छ ।’
प्रचण्डले छोरा प्रकाश दाहालको श्रद्धाञ्जली सभामा र दाहसंस्कारमा सहभागी भएकाहरु सबैलाई धन्यवाद समेत दिए । शोकको समयमा सबैबाट रचनात्मक सहयोग पाउँदा आफ्नो परिवारलार्इ शक्ति प्राप्त भएको पनि प्रचण्डले बताए ।
आन्दोलनको डरले प्रदेश राजधानी र गभर्नर नियुक्ति चुनावपछिलाई सर्यो
प्रकाशको काजक्रिया नगरिने, मंगलबार चितवनमा श्रद्धाञ्जली सभा
दसैँमा मुस्ताङबाट २७ करोडको भेडा, च्याङ्ग्रा निर्यात
छोराले बाँधेर कुटपिट गर्दा आमाको मृत्यु
राजनैतिक भागबन्डाले शिक्षा समिति गठन हुन सकेन
उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत अस्पतालमा भर्ना
समायोजनपछि एक तह बढुवा भएका कर्मचारी सरुवा हुन नपाउने
अखिल क्रान्तिकारीको निर्वाचनको लागि मंगलबार बेलुकासम्म उम्मेदवार नामावली
पौडेलद्धारा देउवाको खुलेरै आलोचना : सभापतिलाई पार्टी हारेको भन्दा प्रधानमन्त्रीको बढि चिन्ता
कांग्रेस महामन्त्री शशांकलाई राखियो चेष्टट्युवमा,एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा
देउवा र दाहालद्धारा पूर्णतया राज्यसत्ता कब्जा, न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म निस्प्रभावी
केपीसँग डिभोर्स गरेका प्रचण्ड माधव नेपालको प्रेममा
डिभिजन टूः नेपालले आज ओमानसँग खेल्ने
खुमबहादुर हत्या योजनाको एसएमएसले प्रहरीमा खैलाबैला
प्रचण्ड सरकाले शुरुमै गल्ती ग¥यो – यादव
पैदल हिडिरहेका युवक बिजुलीको पोलबाट करेन्ट लागेर घाइते